काठमाडौँका नयाँ एसएसपीको यस्तो एक्सन पछि डन हरुमा चल्यो रुवाबासि, नयाँ-पुराना सबै डनहरु काठमाडौँ छाड्दै ! – Enepali Samchar
December 5, 2020 December 5, 2020 adminLeaveaComment on काठमाडौँका नयाँ एसएसपीको यस्तो एक्सन पछि डन हरुमा चल्यो रुवाबासि, नयाँ-पुराना सबै डनहरु काठमाडौँ छाड्दै !
काठमाडौं, काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखामा नयाँ नेतृत्व आउने बितिक्कै विगतमा आक्रामक कार्यशैली देखाउँथे । नयाँ हाकिम आएपछि केही गु’न्डा र हुन्डी कारोबारी पक्राउ गर्नु तथा होटलहरुमा छापा हान्नु एउटा ‘चलन’ नै बनेको थियो ।
परिसर आएको एक साता नहुँदै उनले गु’न्डा अप्रेसन सुरु गरेका छन् । उनको निर्देशनमा आइतबार काठमाडौंका पुराना डन चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खानतालासी लिइएको छ । दरबारमार्गमा उनी चढेको गाडी रोेकेर प्रहरीले खानतालासी लिएको हो ।
काठमाडौंमा अहिले पुराना डनहरु सुस्ताएका छन् । सांसद भएपछि तथा ठमेलको व्यापार सुस्ताएपछि दीपक मनाङे धेरै जसो पोखरातिरै बस्न थालेका छन् ।
गणेश लामा व्यापार नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका छन् । मिनकृष्ण महर्जन ढुंगाखानीबाट कमाएको पैसाबाट कांग्रेसको राजनीतिमै सक्रिय छन् । राजु गोर्खाली अस्पताल तथा रेस्टुरेन्टको व्यापारमा लागेका छन् । उनी अझै पनि बेला बेला विवादमा पर्ने गरेका छन् । स्वयम्भु क्षेत्रका बाघे निर्माण सामाग्रीको व्यवसायमा आबद्ध छन् ।
पछिल्लो समय गु’न्डागर्दी गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगाखानीमा छ । त्यो क्षेत्रमा पैसा धेरै भएकाले गु’न्डाहरु त्यसैमा लगानी गर्न थालेका छन् । अन्य व्यक्तिहरुले पनि गु’न्डासँग सेटिङ नमिलाई चलाउन नसक्ने अवस्था छ । राजनीतिक दलको आवरणमा यस्ता व्यवसायमा उनीहरु लागेका हुन् । केही भने मिटर ब्याज र जुवाको धन्दामा रहेको स्रोत बताउँछ ।
राजधानीका नयाँ-पुराना ‘डन’ निगरानीमा
राजधानीमा रहेका नयाँ-पुराना ‘डन’माथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। यसक्रममा ‘डन’ चक्रे मिलन उर्फ मिलन गुरुङ प्रहरी खानतलासीमा परेका छन्। मिलनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं मातहत सिंहदरबारको टोलीले भद्रकालीमा खानतलासी गरेको हो।
शुक्रबार भद्रकालीअगाडिको चेकप्वाइन्टमा मिलन चढेको कार प्रहरीले रोकेर तलासी लिएको हो। तलासी लिँदा केही फेला नपरेपछि मिलनलाई प्रहरीले छोडेको थियो।
‘डन’हरूको गतिविधिमा निष्कृय रहेको प्रहरी काठमाडौंमा एसएसपी परिवर्तनलगत्तै सक्रिय देखिएको हो।
मिलन राजधानीमा कहलिएका पुराना ‘डन’ हुन्। कुनै बेला मिलन र दीपक मनाङेको काठमाडौंको अपराधमा प्रतिस्पर्धा थियो। मनाङे अहिले सांसद भइसकेका छन् भने मिलनको सक्रियता बाहिर देखिँदैन।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा भर्खरैमात्र अशोक सिंह नयाँ एसएसपी आएका थिए। गत सोमबार हाजिर भएका सिंहले काठमाडौंमा सक्रिय नयाँ-पुराना सबै ‘डन’ प्रहरी निगरानीमा रहेको बताए।
चक्रेमात्र हैन, काठमाडौंका सबै पुराना-नयाँ डनहरू प्रहरी निगरानीमा छन्,’ सिंहले भने, ‘गु’ण्डागर्दीविरूद्धको अपरेसनमा जोकोही पनि खानतलासीमा पर्छन्।’
सिंहले काठमाडौंको सुरक्षा चुनौतीको रूपमा ‘डन’हरू पनि रहेकाले उनीहरूका गतिविधिमा प्रहरी चनाखो रहेको बताए। सिंहले प्रहरीले डनहरूको सूची तयार पारिरहेको बताए।
हामी नयाँ-पुराना सबै डनको गतिविधिलाई अनुसन्धान र निगरानी गरिरहेका छौं, अनुसन्धान सकिएपछि डनहरूको प्रकार छुट्याएर सूची तयार पार्छौं,’ सिंहले भने, ‘त्यसपछि उनीहरू कसले कुन अपराध गरिरहेको छ, आक्रामक रूपमा कारबाही गर्छौं।’
सिंहले काठमाडौंमा सक्रिय पुराना ‘डन’हरू कतिपय राजनीतिज्ञ भइसकेको र राजनीतिक आवरणमा रहेर अपराध गरिरहेको बताए।
आफूलाई सुध्रियौं भन्ने तर भित्र-भित्र आपराधिक गतिविधि गर्ने डन को कस्तो अ’पराधमा संलग्न छन् अध्ययन गरिरहेको छु,’ सिंहले भने। चर्चा बटुल्न नभएर राजधानीको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न ‘डन’हरूमाथि कारबाही थालिएको सिंहले दाबी गरे।
कोरोना कहर र मानिसको पिडा : खुलामञ्चको भात नभए त म भोकै मरिहाल्छु ( हेर्नुहोस् भिडिओ)
राजावादीको गुनासो : राप्रपाले पार्टीकरण गर्न खोज्यो ! अब कता तिर जाला त आन्दोलन ?
मसाल जुलुस गरेर फर्किरहेका केन्द्रीय सदस्य वाग्ले बाटोमा मृत भेटिनु रहस्यमय : नेकपा सर्लाही (विज्ञप्ति सहित हेर्नुहोस)